Toontii Old Trafford Lagu Buufiyay Ayaa Dhaawacyada Keentay-Jamaahiirta Kubbada Cagta Oo Dareenkooda Dhiibtay. - GoolTV.Net
In afar ciyaartoy badal lagu sameeyay qaybtii hore ee kulankii Manchester United iyo Liverpool waxay keentay in su’aalo badan layska waydiiyay sababta dhabta ahayd ee keentay in xalaad ka duwan kulamadii Premier league ee xili ciyaareedkan lagu arkay Old Trafford.
Laakiin jamaahiirta kubbada cagta ayaa isku dayay in ay qiyaasaan isla markaana ay meel u tiiriyaan sababta keentay in dhaawacyo kulankii Old Trafford looga saaray afarta ciyaartoy ee kala ah, Herrera, Mata iyo Lingard oo Man United ka tirsan iyo waliba Roberto Firmino oo Liverpool ka dhaawacmay.
Taageerayaal aad u tiro badan ayaa qiysaa ka bixiyay sababtii keentay dhaawacyada tirada badnaa inkasta oo ay xataa qaar ka mid ah ahi u hadleen sidii ay xaqiiq ahaan u hubaan oo kale.
Man United ayaa ka hor kulankii Liverpool waxay garoonka Old Trafford ku buufiyeen toon si looga dilo cayayaanka caawka garoonka ku dhasha laakiin taageerayaasha ayaa si buuxda u aaminay saamayntii toontu noqotay waxa dhaawacyada ciyaartoyda u keenay.
Aan soo qaadano aragtida dhawr ka mid ah dadkii badnaa ee fikradooda ka dhiibtay in toontii lagu buufiyay cawka garoonka Old Trafford ay dhibaatadan keentay.
Taageere ayaa soo qoray: ” Waxaan ilaa hadda arkayaa inkaartii toonta ee Old Trafford”.
Taageere kale oo isla toonta ka hadlaya ayaa yidhi: “Xaqiiqda sababta uu qof kastaaba isku waydiinayo badalii maanta waa in ayna iyagu jeclayn urta toonta!!”.
Taageere kale ayaa isku dayay in uu sharaxaad badan bixiyo wuxuuna soo qoray: “Toontii xad dhaafka ahayd ee ay Man United ku buufisay garoonkeeda ayaa saaamyn xun ku yeelatay ciyaartoydeeda, iyagu muruqyadooda hal meel kuma hayn karaan. Wiilasha waxaa lagu dabray dhaawacyo”.
Aan ku soo xidhno taageere kale oo soo qoray: ” Waxaan anigu ku eedaynayaa (Dhawacyada) toontii ay usbuuc dhamaadka ku buufiyeen, wiilasha waxaa lagu dabray dhaawacyo”.
Ma aha intan oo kaliya balse falcelin aad u badan ayaa laga sameeyay in toontii Old Trafford lagu buufiyay ay galaafatay Herrera, Mata, Lingard iyo Roberto Firmino. Haddaba akhriste, adigu sideed u aragtaa?